वाइज भिजनलाई भलिबलको उपाधी - Darpanpost
» खेलकुद अंक: 8278
वाइज भिजनलाई भलिबलको उपाधी
माघ २७ । नेसको भलिबल प्रतियोगीताको उपाधी महिला तर्फ वाइज भिजन स्कुल र पुरुष तर्फ गोल्डेन फ्यूचर स्कुलले जित्न सफल भएको छ । नवलपुरका संस्थागत विद्यालयहरुको छाता संस्था नेस को आयोजनामा संस्थागत विद्यालयहरुका बिचमा भलिबल प्रतियोगिता हिजोबाट सुरुभएको थियो । सेन्ट जोसेफ मा.वि. कावासोती नवलपुरको २४ औ बाषीकोत्सवको सन्दर्भ पारेर आयोजना गरिएको प्रतियोगितामा १३ टिमको सहभागिता रहेको थियो । जसमा महिला शिक्षक तर्फ वाइज भिजन प्रथम, गोल्डेन फ्युचर द्धितिय र सुर्योदय विद्या मन्दिर तृतीय हुन सफल भएको छ । भने पुरुष शिक्षकतर्फ गोल्डेन फ्युचर प्रथम, इभर ग्रीन द्धितिय र गैँडाको नमुना साइन्स कलेज तृतीय हुन सफल भएका छन् । कार्यक्रममा प्रथम , द्धितिय र तृतीय हुन सफल शिक्षक खेलाडीहरुलाइ मेडल प्रदान गरिएको छ भने शिल सेन्ट जोसेफ मा.वि. को फागुन ३ गते परेको बार्षिकोत्सवका दिन प्रदान गरिने आयोजकले बताएको छ ।
आजको समापन समारोहमा नेसका अध्यक्ष सन्त बहादुर क्षेत्रीको अध्यक्षता तथा जील्ला खेलकुद विकास समिति नवलपुरका अध्यक्ष विकास केसीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा प्याबसनका केन्द्रीय सदस्य दिपकराज लम्साल को विशिष्ट आतिथ्यता रहेको थियो । त्यसैगरी विशेष अतिथिमा नेसका प्रमुख सल्लाहकार भरतमणि गौतम , प्याबसनका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा नेसका सल्लाहाकार गोपेन्द्र केसरी न्यौपाने को विशेष आतिथ्यता रहेको थियो । कार्यक्रममा जील्ला खेलकुद संघका उपाध्यक्ष हरी पौडेल, कावासोती नगर खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष इन्द्र सिग्देल, नेसका उपाध्यक्ष रामचन्द्र भुषाल, कोषाध्यक्ष नारायण थापा, लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो ।